အင်တာနက်မှာ ၉၉% ခြေရာဖျောက်နည်း (သို့ ) IP လိပ်စာဖျောက်နည်း | Myanmar Black Hacking
8 အင်တာနက်မှာ ၉၉% ခြေရာဖျောက်နည်း (သို့ ) IP လိပ်စာဖျောက်နည်း
ကျနော်တို့တွေဟာအင်တာနက်ပေါ်မှာမကောင်းမှုလုပ်ချင်ရင်ဖြစ်ဖြစ် မိမိအမှန်တကယ်သုံးနေတဲ့နေရာ ကိုမသိစေချင်တာဖြစ်ဖြစ်၊ဟက်ကင်းတွေလုပ်လိုတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ဆိုက်တွေကိုကျော်ခွချင်တာဖြစ်ဖြစ် Proxyတွေ ကျော်ခွဆိုက်တွေသုံးကြရမှာပါ။တချို့ကလဲ(သတင်းသမားတွေ)မိမိတို့လုံခြုံစိတ်ချရဖို့ Real IP ကိုဖျောက်ထားရပါတယ်။ဒီအခါမှာ Proxy Number တွေပရောက်ဇီ ဆော့ဝဲတွေ အစရှိသဖြင့်သုံးကြပါတယ်။ဒါတွေဟာမိမ်ိတို့အိုင်ပီကိုတကယ်ဖျောက်ပေးလားဆိုရင် မဖျောက်ပေးပါလို့ပြောပါရစေReal-Hide-Ip-software,Auto-Hideip အစရှိသဖြင့်နာမည် ကျော် ဆော့ဝဲတွေဟာလဲတကယ်တမ်းဖျောက်မပေးနိုင်ပါဖူး ဒါပေမယ့် ကျနော် ကို ၊အကိုတော်တစ်ယောက်က Tor Browser သုံးဖို့ လမ်းညွှန်လာပါတယ်။ကျနော် သုံးကြည့်တော့မဆိုး ဖူး IP ကို တကယ်ဖျောက်ပေးပြောင်းပေးနိုင်တာတွေ့ရတယ်။၁၀၀ ရာနှုန်း အလုပ် ဖြစ်မဖြစ်ကိုတော့ဆရာ့ ဆရာ ကြီးများကသာ သိပါလိမ့်မယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နဲနဲတော့အလုပ်ဖြစ်မှာမို့စမ်းသုံးကြည့် ရအောင် ....Tor Browser က မောက် ဇီလာ နဲ့ဆင်တူ ပါ တယ် ။ဘယ်ဆိုက်မှာ ပိတ်မထား ဖူး အကုန် ကြည့်လို့ရတယ်။ပြီးတော့အိုင် ပီကို ခဏခဏ ချိန်းပေးတယ်။ကျနော် တို့စမ်းကြည့်ရအောင်https://www.torproject.org/download/download.html.en-ကနေ မိမိတို့စက်နဲ့ကိုက်ညီမယ့်ဗားရှင်းကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်ပါပြီ ....
ပုံမှာ ပြထားတဲ့ အတိုင်း မိမိတို့ အိုင်ပီကိုအမှန်မပြပဲ ။အခြားအိုင်ပီပြတာတွေ့ မှာ ပါ ။
မိမိအိုင်ပီသိချင်ပါက www.whatismyip.com မှာ ၀င်ကြည့်နိုင်ပါသည်။
မူရင်း - Moke Soe Bo
Labels: IP Hider . Linux . Mobile Hacking . Other Tools . PC Software
May 6, 2016, 8:12:00 PM
Nov 13, 2016, 4:52:00 AM
Jan 18, 2017, 3:44:00 AM
UG TM ® said...
May 19, 2017, 11:46:00 AM
philay win said...
Aug 21, 2017, 10:57:00 AM
Mar 6, 2019, 4:10:00 AM
side effect shi yin pyaw pya pay pr
Jun 18, 2019, 3:33:00 AM